စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်းများ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
HASL နှင့် HASL ခဲ-အခမဲ့အကြားခြားနားချက်
PCB ပျဉ်ပြား၏မျက်နှာပြင်ကုသမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်စဉ်များတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်: HASL, လည်းခေါ် &quot;ပူပြင်းquote��့လေထု level&quot;, pcb circuit ကိုပျဉ်ပြားများထုတ်လုပ်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရာဖြစ်ပါသည်. pcb ဆားကစ်ဘုတ်၏အဓိကဂဟေခဲ-အခမဲ့ HASL ဖြစ်ပါသည်. ခဲ-မှုန်ရေမွှားဖြူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်, အရာကိုလည်းအများအားအသုံးပြုကြသည်.
pcb ဘုတ်အဖွဲ့အထောက်အထားများတွင်အသုံးပြုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားကြသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး. ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဓာတု, ငွေယူပြီး, ယင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်.
ယင်းအီလက်ထရောနစ်စည်းဝေးပွဲကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်, ကျနော်တို့ယေဘုယျအားဖြင့်မခေါ်ကြောင်းကြေးမုံဘုတ်အဖွဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစား(မတူညီတဲ့ဘေးထွက်မှန်ဘုတ်အဖွဲ့) ပြောင်းပြန်ဘက်မှန်ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရောင်ကနေဘုတ်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်
အထွေထွေဆားကစ်ဘုတ်ဝယ်လက်အမြဲ PCB ဆားကစ်ဘုတ်၏အရောင်နှင့် ပတ်သက်. သံသယရှိ. သူတို့ဟာ t ကိုအရောင်လိုင်းပျဉ်ပြားကောင်းသောတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွက် '' \_ နိုင်ပါတယ်. ယနေ့တွင်, WMD ဆားကစ်ပတ်လမ်းပျဉ်ပြားပေါ်တွင် PCB အရောင်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်. သက်ရောက်မှုကဘာလဲ?
၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်း 2018, ယင်းအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းပုံမှန်ကြီးထွားလမ်းကြောင်းသစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်. ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကြီးထွားနှုန်းကိုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုကဏ္ဍများ၌ဦးဆောင်မှုအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထား.
ISO ကို 14001: 2015 စံနှုန်းသစ်ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိ
ISO ကို 14001, ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များများအတွက်ကမ္ဘာကြီး \_ 's ပထမဦးဆုံးကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်း, ထက်ပိုပြီးကူညီပေးခဲ့တယ် 300,000 ကမ္ဘာတဝှမ်းအဖွဲ့အစည်းများသူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်. လက်ရှိအချိန်မှာ, စံ၎င်း၏အရာရှိတဦးကဖြန့်ချိပြီးကတည်းကပထမဦးဆုံးအဓိကတည်းဖြတ်မူခံထားပါတယ် 1996.
နေအိမ် လွန်ခဲ့သော 1 နောက်တစ်ခု နောက်ဆုံး - Total 8 1 မှတ်တမ်�စုစုပေါငျး��ားလက်ရှိစာမျက်နှာ / Total 1 10 စာမျက်နှာနှုန်း